इजरायल र अमेरिकाले राष्ट्रपति ट्रम्पलाई सलाम गरे - साम्प्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र B2B बजार समाचार
ट्रम्पले मध्यपूर्व शान्ति सन्धिमा हस्ताक्षर गरे।
जनवरी 19, 2021 जनवरी 19, 2021 डेभिड वेक्सलम्यान ब्लग, डोनाल्ड ट्रम्प, विशेष समाचार, राजनीति
संसारमा खराबीले राम्रोलाई जितिरहेको देखिन्छ।
सबै ट्रम्पको उपलब्धिको लागि, उनका विपक्षीहरूले उनलाई महाभियोग दिन जारी राखेका छन्।
लोकतन्त्र असफल भएको छ; तर चाँडै नै फर्कनेछ।
आफ्नो कार्यकालको अन्तिम दिन, इजरायलका नागरिकहरू, जसमध्ये धेरै अमेरिकी नागरिकहरू पनि चार वर्षको कार्यकालमा भएका सबै उपलब्धीहरूका लागि यस महान व्यक्तिलाई अभिवादन गर्छन्। आज राष्ट्रपति ट्रम्पको कडा परिश्रमबाट अमेरिकी र विश्वका मानिसहरुलाई खोप उपलब्ध गराउन म र धेरै इजरायलीहरुले फाइजर खोपको दुई खुराक लिएका छौं।
इजरायल नेसेटले राष्ट्रपति ट्रम्पलाई अभिवादन गरे।
बाइबलले सिकाउँछ कि यो संसार बिग्रिएको छ। पृथ्वीका महान पुरुषहरूलाई हेराइन्छ र मानवतालाई शोषण गर्नेहरू खडा हुन्छन्। हामीले यस कथनको सत्यता देखिरहेका छौं किनकी कांग्रेसले यस महान् व्यक्तिलाई अमेरिकामा धोका दिए जस्तै गरी फसाउन खोजिरहे। फोहर राजनीति र नक्कली समाचारले सत्यलाई बvert्ग्याउन र यसलाई फर्काउन सफल भएको छ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले उनको चार वर्षको कार्यकालमा गरेका यी उपलब्धिहरु हुन्। २०१ 2016 मा निर्वाचित हुनु अघि उनले प्रतिज्ञाहरू गरे र ती प्रतिज्ञाहरू गरे। एक मात्र कुरा जुन उनको नियन्त्रण बाहिर थियो कोरोना महामारी थियो। त्यो पनि कि उनले रेकर्ड समयमा खोप उत्पादन गर्ने प्रतिज्ञा गरे र उनले आफ्नो वचन पूरा गरे। जीवन र मृत्यु परमेश्वरको हातमा छ जसरी यसले उपदेशकले भनेको छ, त्यहाँ बाँच्ने एउटा समय छ र मृत्युको पनि। राष्ट्रपति ट्रम्प भगवान हुनुहुन्न, उहाँ भगवान हुनुहुन्न र उहाँ कहिले पनि परमेश्वर हुनुहुन्न। ऊ हुन सक्छ दाबी सबै गर्न सक्छन् आफ्नो उपलब्धिहरु जब कार्यालय मा छ। यदि उसले २०२० मा चुनावहरू हरायो भने पनि उसले राम्रो गर्यो। अर्को पक्ष ईर्ष्यालु थियो।
चीन भाइरसले अमेरिकामा आक्रमण गर्नु भन्दा पहिले ट्रम्प प्रशासनले विश्वको सबैभन्दा समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माण गर्‍यो।
उनले सबै पृष्ठभूमिका नागरिकहरूको लागि ठूलो वचन र अवसरको भविष्य प्रदान गरे।
उनले संयुक्त राज्य अमेरिकामा रोजगार कारखाना र उद्योगहरू ल्याए।
शेयर बजारले रेकर्ड नम्बरहरूमा हिट गर्यो।
उनले ग्रामीण अमेरिकामा पुनर्निर्माण र लगानी गर्न कानून मार्फत काम गरे।
स्वतन्त्रता अन्त मा जीत हुनेछ।
कम्बल लकडाउनहरू अस्वीकार गरेर एक रेकर्ड सेटिंग आर्थिक पुन: प्राप्ति प्राप्त।
उनले कानूनमार्फत मध्यम वर्गमा कर राहत ल्याए र कर कोड सुधार गरे।
उसले अवसर क्षेत्रहरूमा रोजगार र लगानी ल्यायो।
पुरानो नियमहरू अन्त भयो जुन व्यवसाय र मजदुरहरूमाथि आक्रमण थियो।
नयाँ कानूनको साथ अमेरिकीहरूका लागि सुधारिएको उचित आवास।
अधिक पैसा अमेरिकीहरूको जेबमा राख्नुहोस्।
अमेरिकी श्रमिकहरूको रक्षा गर्न ऐतिहासिक व्यापारिक सौदा सुरक्षित।
अमेरिकालाई व्यापारमा पहिलो स्थानमा राख्नुहोस् अनुचित व्यापारको सामना गर्न कडा कार्यहरू गरेर।
अमेरिकाका किसानहरुलाई ऐतिहासिक सहयोग दिए।
Unleashed अमेरिका तेल र प्राकृतिक ग्यास क्षमताहरु।
उन्नत महिलाको आर्थिक स्वतन्त्रता।
सशक्त अमेरिकी प्रविधि।
ब्यापारहरूलाई सस्तो विदेशी कामदारहरूलाई रोजगार दिनको लागि अमेरिकीहरूलाई रोजगार दिनुहोस्।
चाइना भाइरससँग निष्पक्ष प्रतिक्रिया गरियो जुन नियन्त्रण बाहिर थियो।
फ्रन्टलाइन कामदारहरूलाई महत्त्वपूर्ण आपूर्ति प्रदान गरियो।
कोरोनासँग लड्न भेन्टिलेटर, मास्क र अन्य महत्वपूर्ण मेडिकल आपूर्तिहरूको संख्या बढ्यो।
कोरोनाको लागि सबैभन्दा ठूलो र सबैभन्दा परिष्कृत परीक्षण कार्यक्रम सिर्जना गरियो।
रेकर्ड समयमा खोप फाईजर र Moderna उत्पादन।
अमेरिकी ईतिहासको सब भन्दा ठूलो आर्थिक सहायता प्याकेजमा कार्यरत।
ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि स्वास्थ्य सेवालाई सशक्त।
संघीय न्याय प्रणालीलाई सशक्त बनायो।
दक्षिणमा एक मजबूत सीमा निर्माण गर्न काम गर्‍यो।
अमेरिकाको अध्यागमन कानून लागू।
विदेशमा अमेरिकी नेतृत्व पुनर्स्थापित।
उन्नत शान्ति शक्ति मार्फत।
इरानको साथ आणविक आणविक शान्ति सन्धि रद्द गरेर इजरायलसँग अमेरिकी गठबन्धन नविकरण गरियो।
इस्राएललाई आफ्ना अरब छिमेकीहरू सँगै लिएर आयो।
अमेरिकी दूतावासलाई यरूशलेममा सार्दै इजरायललाई सुदृढ पार्‍यो।
आतंकवादको विरुद्ध खडा।
साम्यवाद र समाजवादको बिरूद्ध अडिग मानव अधिकारको रक्षा गर्दै।
अमेरिकी सेनाको सुदृढीकरण।
अमेरिकी दिग्गजहरूलाई मान्यता र समर्थन दिए।
कानूनमा हस्ताक्षर गरिएको महत्वपूर्ण अपराधिक न्याय सुधारहरू कानून प्रवर्तनलाई समर्थन गर्दछ।
जीवन र धार्मिक स्वतन्त्रताको कदर गर्दै धार्मिक स्वतन्त्रता सुदृढ पार्दै।
वातावरणीय सुधारका लागि काम गरे।
विस्तारित शैक्षिक अवसरहरू।
ओपिओइड स Com्कटसँग लडियो।
यी सबै उपलब्धिहरु को लागि उनको प्रशंसा गरिनु पर्छ। बरु ऊ अन्याय भइरहेको छ। न्याय कहाँ छ? के तपाईं बुझ्नुहुन्छ किन ट्रम्पले विश्वास नगरेका कारण उनले चुनाव हराए?
सांप्रदायिक समाचार स्वतन्त्रता परमेश्वरको शान्ति ट्रम्प
उद्यमी कोचिंग - Ent उद्यमी स्टार्टअप गलतबाट बच्नका लागि र सफल हुन T सुझावहरू
जर्जिया सर्किभेन्ट रूसी विदेशी एजेन्ट ऐन